प्रमिलाले श्रीमानलाई मा’रेर भान्छामा गा’डिन्, त्यहीँमाथि चुलो बनाएर १ महिना खाना पकाइन् – Gandaki Chhadke
एक महिलाले आफ्ना श्रीमानलाई मा’रेर भान्छामा गा’डिन् । यतिमात्र होइन जहाँ श्रीमानको चि’हान बनाइन त्यहीँ माथि चलो बनाएर एक महिनासम्म खाना बनाइरहिन् । यो स’नस’नीपूर्ण घ’टना भारतको मध्य प्रदेशको अनुपपुर जिल्लाको भएको आज तकको समाचारमा उल्लेख छ ।
३२ वर्षकी प्रमिला नामकी ती महिलाले आफ्ना वकिल पति महेश बैनेवालको ह’त्या गरेकी हुन् ।बिहीबार अनुपपुर पुलिसले उनलाई आफ्ना पतिको ह’त्या गरेको आ’रोपमा प’क्राउ गरेको छ ।महेश एक महिनादेखि बेपत्ता भएको भन्दै पुलिसले खोजी गरिरहेको थियो ।
२२ अक्टोबरमा प्रमिलाले पति बेपत्ता भएको भन्दै पुलिसमा रिपोर्ट लेखाएकी थिइन् । पुलिसले बेपत्ता भएकै आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो तर २१ नोभेम्बरमा यो घ’टनामा ट्वीस्ट आयो । मृ’तकका दाजु अर्जुन बैनेवालले पुलिसलाई आफ्नो भाइको घरमा केही संदिग्ध भएको बताए ।
अर्जुनका अनुसार उनी कैयौं पटक भाइको घर गए तर उनकी पत्नीले हरेक पटक उनलाई केही न केही बहाना बनाएर टारिन् । त्यसपछि पुलिस एसएचओ भानु प्रताप सिंह आफ्नो टिमका साथ उनको घरमा जाँदा उनीहरुलाई पनि केही दु’र्गन्ध महसुस भयो ।
जब उनीहरु किचनको नजिक गए दुर्गन्ध झनै बढ्यो । किचनमा दुर्गन्ध आएको ठाउँमा खनेर हेर्दा त्यहाँ मृ’तकको श’व भेटियो ।श’व भेटिएपछि सोधपुछमा मृ’तककी पत्नी प्रमिलाले आफ्ना पतिको दाजु गंगालाल बैनेवालकी पत्नीसँग अवैध सम्बन्ध भएको बताइन् । यो थाहा पाएपछि प्रमिला र गंगारामले मिलेर उनलाई मार्ने योजना बनाए ।
प्रमिलाको यो बयानपछि गंगारामले भने आफू ह’त्याको योजनामा सहभागी नभएको दावी गरेका छन् । पुलिसले यो घ’टनामा थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । जीवनभर एकअर्कालाई साथ दिने बाचा कसम खाएर जोडिएको कतिपयको सम्बन्ध बिच बाटोमै आएर तोडिन्छ ।
एउटै छानोमुनी बस्ने, एउटै ओछ्यानमा सुत्ने, एउटै थालमा खाने भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएका जोडिहरु एकाएक किन टुट्छन् ? आत्मियताको साथ प्रगाढ बनेको सम्बन्धमा कटुता आउनु भ्रम र अविश्वास बढ्नु अन्ततः अलग विषय हुन् । तर सम्बन्धलाई पुनविराम दिने अवस्थामा पुग्न एउटै कारण हुँदैन् ।
यो बेला दुवैले आफुहरुको सम्बन्धमा केही न केही गल्ती गरेकै हुन्छन् । एक दाम्पत्य जोडी टुट्नु एक दुखद कुरा कुरा हो । यसले श्रीमान श्रीमतीलाई मात्र हैन उनीको सन्तानलाई समेत नराम्रो असर पर्छ । उनीहरुका आफन्त , नातेदार इष्टमित्र छरछिमेकी यस्तो कुराबाट प्रभावित हुन्छन् ।
जब दम्पतिबिच फाटो आउँछ तब उनीहरु एउटै छानोमुनी बस्न सक्दैनन् र अलग हुन बाध्य हुन्छन् । पति पत्नीबिचको महत्वकांक्षा पनि कहिलेकाही दाम्पत्य सम्बन्धमा फाटो ल्याउने कारण बन्छ । एक विवाहित महिलाले घरको संघार नाघेर बाहिर आउनु बिद्रोह गरे जतिकै हो ।
कतिपय यस्तो परिवार हुन्छ जहाँ यस्तो अशोभनिय काम गर्नु र आफुलाई खुुम्चाएर राख्न सक्दैनन् । उनीहरुले आफ्नो इच्छा आंकाक्षालाई खुम्चाएर राख्न बा’ध्य हुन्छन् ।घरको परिधिबाट बाहिर जान खोज्दा पति पत्नी बिचको सम्बन्धमा मतभेद आउँछ ।कारण सम्बन्धले अर्कै मोड लिन्छ ।
कतिपय श्रीमती उच्च महत्वकांक्षा हुने हुँदा उनीहरु परिवारको परिधिबाट बाहिर आउन चाहन्छन् ।यस्तो अवस्थामा श्रीमान श्रीमतीको मतभेद मिल्दैन् । यस्तै कुरालाई नियाल्नै जाने हो भने के श्रीमती महत्वाकांक्षी हुनु समस्या हो त ? भन्ने जटिल प्रश्न आउन सक्छ ।
किनकी हाम्रो समाजमा एक विवाहित महिलालाई परिवार सम्हाल्ने दायित्व दिएको हुन्छ ।सामाजिक परम्परालाई स्वीकार गर्ने हो भने एक महिलाले छोराछोरी, सासु , ससुरा घर व्यवहार सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ । पत्नीले घरको काम सम्हालेपछि पतीलाई घरबाहिरको जिम्मेवारी दिएको हुन्छ ।
यद्यपी यस्तो किसिमको तालमेलले दाम्पत्य जीवनमा सुख छाउँछ । तर एक महिला तथा एक श्रीमती घरधन्दामा नै सिमित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।यसअर्थ श्रीमतीको महत्वकाक्षा आफैमा समस्या भने होइन् । तर त्यसलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु चाँही समस्या हो ।
अक्सर श्रीमतीको महत्वकांक्षा पुरा गर्ने बाटोमा श्रीमानले सहयोग गर्छन त भन्ने कुरामा नकारात्मक जवाफ आउन सक्छ । किनकी पुरुष आफै अभिमान हुन्छ । अक्सर धेरै श्रीमान चाहन्छन् की श्रीमती आफु भन्दा अगाडी नजाओस् ।